Shacabka Ingiriiska oo saaka u dareeraya doorasho xasaasi ah – Radio Daljir
Shacabka Ingiriiska oo saaka u dareeraya doorasho xasaasi ah
Diseembar 12, 2019 6:16 b 1
Shacabka dalka Ingiriiska ayaa saaka oo khamiis ah u dareeraya doorashadii guud ee saddexaad ee muddo shan sano gudahood ka dhacda dalkaas.
Doorashadan oo markii ugu horeysay muddo boqol sano ah la qabanayo bisha Disemabar ayaa waxaa ay daba joogtaa doorashooyinkii horay uga dhacay dalka Britain sanadihii 2015 iyo 2017.
Goobaha codbixinta oo gaaraya 650 xarumood oo ku kala yaala guud ahaan England, Wales, Scotland iyo waqooyiga Ireland ayaa lagu wada in saaka afarta barqanimo ay furmaan.
Marka ay dhamaato codbixinta afarta saac ee habeenimo, waxaa bilaaban doonaa tirinta codadka, inta bandanna natiijada ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo saacadaha hore ee maalinta jimcaha.
Doorashadan ayaa lagu dooran doonaa xildhibaano gaaraya 650, waxaana xisbiga helaa kuraasta ugu badan ee barlamaanka uu noqonayaa ra’iisul wasaaraha dalkaas.
Sanadkii 2017-ka, deegaan barlamaaneedka bartamaha Newcastle ayaa ahayd halkii ugu horeysay ee natiijadeeda lagu dhawaaqo saacado un kadib markii ay goobaha codbixinta xirmeen.
Doorashada dalka Ingiriiska ayaa inta badan qabsoonta afar ama shan sano kadib, hasayeeshee xildhibanaada dalkaas ayaa bishii Oktoobar ee sanadkan u codeeyay in la qabto doorasho wakhtigeeda laga soo horumariyay, waana markii ugu horeysay oo doorasho la qabto xilliga xagaaga yan iyo sanadkii 1974.
Doorashadan ayaa waxaa ka qeyb qaadan kara dadka ay da’dooda ka weyn tahay 18 sano ee u dhashay dalkaas, heystana kaarka codbixinta.
Shacabka ayay guddiga doorashada shegeen in aysan u baahneyn in ay qaataan kaararka codbixinta, balse looga baahan yahay in ay gudbiyaan magacyadooda iyo halka ay doonayaan in ay ka codeyaan. Qofwalbana waxaa uu u codeyn karaa hal musharax oo keliya.
Kooxaha la socda doorashada ayaa maalmihii lasoo dhaafay shacabka uga digayay in ay isku dul sawiraan sanduuqa codbixinta, taas oo ay shegeen in ay noqon doontaa arrin aan la oggolaan doonin oo dembi ah.
Dad badan ayaa haatan durbaba sii gudbiyay magacyada qofka ay dooranayaan. Dadka ilaa iyo haatan dalbaday in ay ku codeeyaan qaabka boostada balse aan dib usoo celinin warqaaha ayaa waxaa la sheegay in ay heystaan ilaa iyo caawa saqda dhexe xilliga geeska Afrika.
Garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta oo xiran
Saaka & Dunida iyo CXakiin Xuseen Xasan, Daljir Garoowe (daawo)
EVERY DOG THE HAS DAY!!!!.
WAA MAAHMAAHDII MAANTA EE BORAS JOHNSON.KKKK.
SOMALIDU WAA WADA LABOUR PARTY!!!.